May 2015 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 7:56:00 PM 0
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 7:49:00 PM 0
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 9:46:00 AM 0
Android Application Phone Application Viber
Win Hlaing at 10:28:00 PM 0
Maung Pauk at 5:08:00 PM 0
CoC မှာ ကိုယ့် ရွာလေးကို ကာကွယ်မှုတွေ လုပ်ပေးမယ့် Clash Of Clans Auto Reloader APK
Clash Of Clans Auto Reloader APK : 1.1 Mb
ဒီ App လေးကတော့ CoC ကစားသူတွေ. ကိုယ်က ကစားဖို့အချိန်မရလို့ ကိုယ့် Village ကို လာရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမခံရအောင် Auto Reload လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. Official CoC အတွက် ထောက်ပံ့ပေးထားတာဖြစ်ပြီး ကိုယ့် Troops တွေကို လေ့ကျင့်မှု မပေးနိုင်သေးတဲ့အခါ၊ ကိုယ့်ရွာကို ကာကွယ်ပေးဖို့အတွက် ဒီ App လေးက ဆောင်ရွက်ပေးထားနိုင်မှာပါ.. Root ရှိဖို့မလိုအပ်ပါဘူး..
အင်တာနက်ဖွင့်ပြီး ဒီ Clash Of Clans Auto Reloader ကို Run ပါ.. ကိုယ့် ရွာလေး မလုံခြုံတော့ဘူးထင်လောက်အောင် CoC မဆော့နိုင်သေးတဲ့အချိန်တိုင်း ဒီကောင်လေးကို Run ပေးထားရပါမယ်.. ကိုယ်ပြန်ကစားတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို Stop လုပ်ပြီးမှ ကစားနိုင်ပါတယ်...
[ ဒီ App လေးကတော့ CoC ကစားသူတှေ. ကိုယျက ကစားဖို့အခြိနျမရလို့ ကိုယျ့ Village ကို လာရောကျတိုကျခိုကျခွငျးမခံရအောငျ Auto Reload လုပျပေးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ.. Official CoC အတှကျ ထောကျပံ့ပေးထားတာဖွဈပွီး ကိုယျ့ Troops တှကေို လကေ့ငျြ့မှု မပေးနိုငျသေးတဲ့အခါ၊ ကိုယျ့ရှာကို ကာကှယျပေးဖို့အတှကျ ဒီ App လေးက ဆောငျရှကျပေးထားနိုငျမှာပါ.. Root ရှိဖို့မလိုအပျပါဘူး..
အငျတာနကျဖှငျ့ပွီး ဒီ Clash Of Clans Auto Reloader ကို Run ပါ.. ကိုယျ့ ရှာလေး မလုံခွုံတော့ဘူးထငျလောကျအောငျ CoC မဆော့နိုငျသေးတဲ့အခြိနျတိုငျး ဒီကောငျလေးကို Run ပေးထားရပါမယျ.. ကိုယျပွနျကစားတော့မယျဆိုရငျတော့ ဒီကောငျလေးကို Stop လုပျပွီးမှ ကစားနိုငျပါတယျ... ]
Features of Clash Of Clans Auto Reloader
Your village is safe through the night.
Doesn’t Hack or Modify any data of the game.
Reloads the game Every few minutes.
Attacker can’t attack you till you stop Auto Reloader
Don’t close your internet connection till you use it.
Don’t forget to stop Auto Reloader before playing CoC Again.
Before using this tool make sure you connect your village with your account for backup.
Don’t forget to charge your Device.
You might not be able to use your device till it works.As it keeps on Reloading
Sometimes your game is disconnected by supercell for playing for toll long time.This doesn’t mean your account is banned you can again open the game after 10 minutes.
Don’t forget to read this whole post carefully.
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 12:05:00 AM 0
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 9:27:00 PM 0
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 8:31:00 PM 0
English စာလေ့လာသူများအတွက် (ဝင်းလှိုင်(နည်းပညာ) ၏ English Speaking and Vocabulary E book
Win Hlaing at 3:29:00 PM 0
English လေ့လာသူများအတွက် English To Myanmar and Myanmar To English စာအုပ်လေး PDF ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးကတော့ အသုံးဝင်းတဲ့ English စကားလုံးတွေကိုရှာဖွေးပြီးလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်ထဲ့မှာ မိမိပို့စ်များ သွားလို့ရှိပါက ကျနော်အားခွင့်လွတ်ပေးပါလို့ပြောထားပါရစေဗျာ။ အားလုံးကို လည်း credit and Ref ပေးပါ၏။ English လေ့လာသူများအတွက် ဒီစာအုပ်က အရမ်းကိုကောင်းပါတယ် နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သူများဆောင်းထားစေချင်းပါတယ်။
facebook သုံးတဲ့သူများအတွက် updater Version-Facebook v35.0.0.0.337 Apk
Win Hlaing at 12:31:00 AM 0
Android ဖုန်းဘော်ဒါတို့အတွက် ဘော်ဒါတို့၏ မိတ်ဆွေးကောင်း Facebook ဗားရှမ်းသစ်လေဖြစ်တဲ့ facebook application လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အထူးအထွေ ပြောစရာမလိုပါဘူး Facebook ကို ကလေးတွေသိပြီး အခုရှိရင် .... Updated လိုချင်းသူများအတွက် အောက်မှာသာဒေါင်းလိုက်ပါတော့ဗျာ....ဒီကောင်လေး၏ဖိုင်ဆိုဒ်လေးကတော့33.14MB ဖြစ်ပြီး Android OS, Tablet အားလုံးမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။
Android Games Fast&Farious
www.techniquehelper.blogger.com at 12:14:00 AM 0
ရုပ်ရှင်ရုံမှာဆိုနာမည်ကြီးဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Fast&Furious7game လေးကို ဖုန်းမှာအသုံးပြုဆော့လို့ရပါပြီးခင်ဗျာ
အရင်က f&f ကို update လုပ်ထားလို့
graphic မှာလည်း တော်တော်လေး
အရုပ်ဆိုးနေသလား ဒီကောင်လေးနဲ့ ချောချော ရုပ်ကလေးလုပ်/ ရိုက်မယ်-Camera360 Ultimate v6.2 Apk
Win Hlaing at 12:03:00 AM 0
Android phone/Tablet အသုံးပြုပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လေ့ရှိသူတွေ အတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေး Camera360 Ultimate v6.2 Apk ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Camera360 ဟာ Android phone/Tablet အသုံးပြုသူတိုင်းမစိမ်းတော့တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ Camera mode များစွာကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပြီး ရူပါ ဂွမ်းတဲ့သူတွေတောင် လန်းလာစေမယ့် ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ အတော်တော်များများသုံးစွဲနေတာတွေ့ရပါတယ်။အခုနောက်ထွက်ဗားရှင်းမှာလည်း Camera Store/Effect Store စသဖြင့် features များထပ်ပေါင်းထားတာတွေ့ရပြီးရယူလိုသူများအောက်လင့်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်
Android Application Android Tool Phone Application Root Tools
Samsung Galxy S6 ကိုတောင် တစ်ချက်တည်းနဲ့ Root ပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ Kingroot 4.1.0.249 apk
Maung Pauk at 4:29:00 PM 1
Android ထဲမှာပဲ Root ဖောက်နိုင်တဲ့ apk တွေထဲမှာ နောက်ဆုံး လက်စွမ်းထက်လာတာက Kingroot ဖြစ်ပါတယ်.. Android ဖုန်းအားလုံးနီးပါးကို တစ်ချက်တည်းနဲ့ Root ပေါက်နိုင်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးလာတာပါ.. ခု နောက်ဆုံးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ Kingroot 4.1.0.249 apk ဟာ Samsung Galxy S6 သာမက Sony Z3(5.0) တွေလိုမျိုး Hight end Smart Phone တွေရဲ့ Android 5.0 အထက်တွေကိုတောင် Root ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်.. Forumxda မှာ ဖေါ်ပြထားချက်အရဆိုရင် Samsung Model ပေါင်း များစွာ၊ Huawei, HTC, Sony, Google Nexus, LG, ZTE စတဲ့ Smart Phone များစွာကို Root ပေါက်နိုင်ကြောင်း ထောက်ခံထားပါတယ်.. အောက်ဆုံးက လင့်မှာ Forum XDA ရဲ့ Kingroot နဲ့ ပေါက်တဲ့ List ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်.. ကဲ ခုတော့ Kingroot 4.1.0.249 apk လေး ဒေါင်းလိုက်ပါအုံး...
[ Android ထဲမှာပဲ Root ဖောကျနိုငျတဲ့ apk တှထေဲမှာ နောကျဆုံး လကျစှမျးထကျလာတာက Kingroot ဖွဈပါတယျ.. Android ဖုနျးအားလုံးနီးပါးကို တဈခကျြတညျးနဲ့ Root ပေါကျနိုငျဆိုပွီး နာမညျကွီးလာတာပါ.. ခု နောကျဆုံးထုတျပေးလိုကျတဲ့ Kingroot 4.1.0.249 apk ဟာ Samsung Galxy S6 သာမက Sony Z3(5.0) တှလေိုမြိုး Hight end Smart Phone တှရေဲ့ Android 5.0 အထကျတှကေိုတောငျ Root ပေးနိုငျတယျလို့ဆိုပါတယျ.. Forumxda မှာ ဖျေါပွထားခကျြအရဆိုရငျ Samsung Model ပေါငျး မြားစှာ၊ Huawei, HTC, Sony, Google Nexus, LG, ZTE စတဲ့ Smart Phone မြားစှာကို Root ပေါကျနိုငျကွောငျး ထောကျခံထားပါတယျ.. အောကျဆုံးက လငျ့မှာ Forum XDA ရဲ့ Kingroot နဲ့ ပေါကျတဲ့ List ကို ကွညျ့နိုငျပါတယျ.. ကဲ ခုတော့ Kingroot 4.1.0.249 apk လေး ဒေါငျးလိုကျပါအုံး... ]
Kingroot 4.1.0.249 apk : 6.42 Mb
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 2:19:00 PM 0
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 2:15:00 PM 0
ဓာတ်ပုံကို အလန်းစာအမိုက်စားEffect တွေနဲ့ ရိုက်/ပြုလုပ်နိုင်တဲ့-Camera FV-5 v2.69 Apk (နောက်ဆုံးထွက် Version)
Win Hlaing at 10:56:00 PM 0
Android သို့မဟုတ် Tablet သုံးထားသူများအတွက် ဒီတခါအရမ်းကောင်းတဲ့ Camera Fv-5 Updater လေးကိုတင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်းကိုတော့ အလင်းအမှောင်နဲ့ ဓာတ်ပုံ၏ ကာလာလေးတွေကို မိမိလိုသလောက် စိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်း တစ်လုံးရှိတာနဲ့ ဓာတ်ပုံဆိုင်တွေမသွားဘဲ မိမိ၇ိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံကို ဒီ Application နဲ့ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။နမူနာအနေနဲ့ အောက်မှာ Screen Shot တွေရိုက်ပြ ထားပါတယ်။ Android OS 2.2နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။File Size ကလည်း4.45 MB လေးပဲရှိတာမို့ လိုအပ်ရင်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဒေါင်း ယူထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ။
ရုပ်ရှင်ဗွီဒီယိုများကြည့်ရန်နှင့် သီချင်းတွေနားထောင်းရန်-MX Player Pro v1.7.39.nightly.20150513 Patched Apk (latest version)
Win Hlaing at 10:32:00 PM 0
Android ဖုန်းပေါ်မှာ Video File တော်တော်များများကို Format လုပ်ပေးနိုင်တဲ့MX Player Pro နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းကိုတင်းပေးလိုက်ပါတယ်။တချို့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် original ပါတဲ့ video player က တချို့ video file တွေကို Support မလုပ်ပေးပါဘူး။အဲ့လိုအခါမျိုးမှာ ဒီPlayer လေးက အကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်။video file တော်တော်များများကို supported လုပ် ပေးနိုင်ပါတယ်။Subtitle Scroll Mode စနစ်ပါဝင်တာမို့စာတန်းထိုးစနစ်နဲ့ Format လုပ်ထားတဲ့ Video File တွေကိုလည်း အဆင်ပြေပြေ ဖွင့်ကြည့်နိုင်စေပါတယ်။ဒါ့အပြင် video file ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရာမှာ Connection အတက်အကျ မမှန်၍ ထစ်ငေါ့ သွားသော နေရာများကို ဒီ player ကနေ အထစ်အငေါ့ နည်းပါးစွာနဲ့ ကြည့်ရှုလို့ ရစေတာကိုလည်း တွေ့ရပါသေးတယ်။ဒီကောင်းလေး၏ဖိုင်းဆိုဒ်တော့6MB ရှိပြီး Android OS 2.3 အထက်ရှိဖုန်းများသုံးနိုင်ပါတယ်။
Patch apk Download Here
Aung Ko Htet at 4:59:00 PM 0
Effects အလန်းတွေနဲ့ ကပ်/ ဖြတ်/ ညပ် ..။ဗွီဒီယိုလုပ်မယ်-Video Editor v2.5Apk
Win Hlaing at 1:15:00 PM 0
Android ဖုန်းကိုင်းဆောင်ထားသော ဘော်ဒါတို့အတွက်Effects အလန်းတွေနဲ့ ဖုန်းထဲမှာ ဗွီဒီယိုလုပ်မယ့်ဆိုရင် ဒီကောင်လေးကတော့ ဘော်ဒါတို့အတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်။ဒီကောင်လေးကတော့ slideshow,trimming, frame grabbing, video effects, extract audio (convert to MP3/MP4)တို့အပြင် video effects မျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။မိမိပြုလုပ်ပြီးသားဟာကိုလည်း e-mail, YouTube,Facebook သို့upload လုပ်နိုင်ပြိး တိုက်ရိုက် Share ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်လေးကတော့5.35MB ဖြစ်ပြီး Android OS 2.3.3 နှင့်အထက်ရှိဖုန်းများအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။